Shiinaha Portable 2 1 1 Siilka 11 xariiq HIFU soosaarayaasha iyo alaabada | MENOBeauty
La qaadan karo 2 1 1 Siilka 11 xariiq HIFU
Shiinaha soo saaraha ugu horreeya orginal
2 ka mid ah 1 Siilka 11 xariiq HIFU
8 kartoon oo loogu talagalay wajiga & jirka, 2 kaydadka siilka
● 2 ee 1 11 sadar 3D siilka HIFU
Wadarta 8 Cartridges ee wajiga iyo jirka (1.5,3.0,4.5,6,8,10,13,16mm)
2 Kartoorrada siilka( 3.0mm, 4.5mm)
Mabda ' HIFU loogu talagalay daaweynta wajiga & jirka
Diirada Ultrasonic wuxuu gaaraa lakabka SMAS iyada oo leh qalab gaar ah oo xoog leh oo sareeya, wuxuu hagaajiyaa joojinta SMAS, si buuxda u xallila dhibaatooyinka wajiga iyo nasashada. Waxay si sax ah u dhigeysaa awoodda ultrasonic ee SMAS 4.5mm maqaarka hoostiisa, iyadoo fulineysa saameynta ugu wanaagsan ee qaabeynta, jiidaya iyo isugeynta koritaanka murqaha iyo jarista; Saameyn ku yeelashada lakabka kolajka ee 3mm maqaarka hoostiisa, sameynta collagen-ka dib u habeyn iyo dhalasho, xalinta dhibaatooyinka gabowga iyadoo lagu bogsanayo dabacsanaanta, maqaarka oo caddeeya, laalaabidda duuduubka iyo daloolada oo sii yaraanaya.
Waa wax aan loo baahnayn in laga werwero dhaawaca maqaarka maxaa yeelay awoodda ayaa ka sarreysa epidermis-ka. Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay shaqooyinka jiidaha degdegga ah, isukeenista miisaanka iyo jilicsanaanta laalaabka degdegga ah.
Mabda'a HIFU ee daaweynta siilka
Diirada Ultrasonic wuxuu gaaraa lakabka SMAS iyada oo leh qalab gaar ah oo xoog leh oo sareeya, wuxuu hagaajiyaa joojinta SMAS, si buuxda u xallila dhibaatooyinka wajiga iyo nasashada. Waxay si sax ah u dhigeysaa awoodda ultrasonic ee SMAS 4.5mm maqaarka hoostiisa, iyadoo fulineysa saameynta ugu fiican ee Khafiifinta xubinta taranka Gaarka ah; saamaynta lakabka collagen 3mm ee maqaarka hoostiisa, samaynta kolajka dib u habeyn iyo dhalasho, xalinta dhibaatooyinka dabacsan ee xubinta taranka iyada oo dib u soo ceshanaysa dabacsanaanta iyo gaaritaanka nasashada siilka. maxaa yeelay tamarta ayaa soo martay epidermis, sidaa darteed waxba ha ka welwelin dhaawaca xabka, ha ka welwelin maxaa yeelay infekshinka hargabka ee ku saabsan dhaawaca xabka ayaa sababay!
Mashiinkaani wuxuu si otomaatig ah ugu wareejiyaa baaritaanka xubinta taranka ee bukaanka, wuxuuna si siman ugu shaqeeyaa lakabka SMAS ee khadadka 300-500 ee xubinta taranka ee bukaanka (qiyaastii 5000-13000 dhibco), taasoo ku guuleysata saameyn aad u fiican oo adkeynta siilka ah.
Hore: Hifu siilka la qaadan karo
Xiga: Vertical 2 1 1 Siilka 11 xariiq HIFU
Vertical 2 1 1 Siilka 11 xariiq HIFU